Malunga nathi -Shijiazhuang Mets Machinery Co., Ltd.
I-Shijiazhuang Mets Machinery Co, Ltd.(emva koku kubizwa ngokuba yiMets Machinery) yinkampani yamazwe aphesheya egxila kwimveliso kunye neenkonzo zeempompo zentsimbi. Iofisi eyintloko ibekwe kwindawo yophuhliso oluphezulu, iShijiazhuang City, Hebei Prov.,. Oomatshini beMets balawula u-Hebei Hanchang Minerals Co, Ltd. kunye neenkxaso-mali ezininzi zamanye amazwe.
Mets Machinery yasekwa ngo-2008, le nkampani usoloko ngokubhekisele umgangatho imveliso, uphando kunye nophuhliso lobomi. I-30% ngabaphuhlisi bobuchwephesha phakathi kwabasebenzi abali-100 baseTshayina nabangaphandle kwinkampani. Mets Machinery utyale ngaphezulu kwe-120 yezigidi ze-yuan kwitekhnoloji, ukuhlolwa komgangatho kunye nokuphuculwa kwenkqubo yemveliso kule minyaka ili-10 idlulileyo, eqinisekisa umgangatho wehlabathi weemveliso zethu.
Umsebenzi wethu wenkonzo kukuba sibe yingcali yeengxenye zabathengi bethu. Sisoloko sibambelela kumgaqo ojolise kubathengi. Besisakha iindawo zokugcina iimpahla kunye namaziko enkonzo kwezona ndawo ziphambili zemigodi zehlabathi, sithatha intengiso yemithwalo siye kwinqanaba elinzulu.
Ngapha koko oomatshini boomatshini abasebenza ngenkuthalo bagcina indawo yokugcina izinto kunye neyona nkonzo yeqela emva kwentengiso. Ngoku indawo yokugcina izinto kunye neworkshop ePerth, eOstreliya naseLaos kuMazantsi mpuma eAsia sele iqalile ukusebenza. Emva kokuthengisa amaziko enkonzo kuMbindi Mpuma, ubumbano lwamazwe azimeleyo, uMzantsi Melika kunye ne-Afrika esembindini ziyacwangciswa kwaye zakhiwa inyathelo ngenyathelo.
Siyagxininisa ekuboneleleni ngezincedisi ezithembekileyo nezikumgangatho ophezulu kubathengi ngeli xesha lifutshane.
Injongo yeMetslurry "UKUBA YIINDAWO ZAKHO ZOKUSETYENZISWA KWEZINDLU NOMASIFUNDISANE".
Iimethi ezinikezelwe ukubonelela ngezixhobo zemigodi ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ye-OEM kumabala emigodi. Sinyanzelisa ekuboneleleni umsebenzisi iimveliso umgangatho oluthembekileyo elifutshane phambili ixesha.
Inkampani yethu ibambelela kumgaqo wolawulo "ojolise ebantwini", sihlala siququzelela iindlela ezahlukeneyo zomsebenzi wokuzonwabisa, ukuphucula impilo yomzimba, ukutyebisa ubomi bomqeshwa, kwenza konke okusemandleni ukuvumela abasebenzi kwinkampani ukuba bafumane imvakalelo "yekhaya" .
Inkampani yethu ihlala ithobela "ubuchule, ubuchule, ubuchule, ubungcali" kwifilosofi yeshishini, kunye '' neemveliso ezikumgangatho ophezulu '', '' ixabiso lokukhuphisana '' kunye '' nokunikezelwa kwexesha '' ukuhlangabezana neemfuno zobuchwephesha yabathengi abohlukeneyo.
Iinkxaso-mali kwihlabathi liphela
Ekuqaleni kokusekwa kwayo, isicwangciso-qhinga sophuhliso lophando oluzimeleyo kunye nophuhliso kunye nokwenza uphawu lwelizwe kwaqulunqwa.
Ukuzinikezela nokuzingisa kusivumela ukuba siqokelele itekhnoloji kunye namava kwaye sibeke isiseko sophuhliso.
Ukwandiswa kwesikali semveliso kungenxa yokuba sihlala sibambelela kwimigangatho yomgangatho ophezulu.
Lungiselela izixhobo, iteknoloji kunye nenkqubo yolawulo ukuziqhelanisa nokwandiswa kwesikali.
Ukwandisa umzi-mveliso, ukongeza izixhobo zokulawula amanani, kunye nokuphucula isikali kunye nomgangatho.
Inkqubela eqhubekayo kwizicelo ezitsha, ukudala ixabiso kubathengi, kunye nokuya kwikamva lobungcali.